သံဃာများပြည်ပသွားဖို့ မလိုတော့ပါ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ သင်ကြားပေးမည့် ဓမ္မဒူတဆေကိန္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီး - Myanmar Red News
သံဃာများပြည်ပသွားဖို့ မလိုတော့ပါ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ သင်ကြားပေးမည့် ဓမ္မဒူတဆေကိန္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီး
စာသင်သံဃာများ ပြည်ပသွားဖို့ လုံးဝ မလိုတော့ပါ
“အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ သင်ကြားပေးမည့် ဓမ္မဒူတဆေကိန္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီး”
ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒဆရာတော်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်ဓမ္မဒူတဆေကိန္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီး ( Dhammaduta Chekinda University) ကို
( ဓမ္မဒူတဇေတဝန်တောရဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းတိုက် မှော်ဘီမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်) 2019-2020 ပညာသင်နှစ်အဖြစ် မကြာခင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးပါတော့မည်။
M.A & Ph.D Degree ကျောင်းသားများကိုစတင်ကာ လက္ခံပြီး သင်ကြားပေးပါမည်။
M.A တန်းအတွက် အဓိကဘာသာရပ်များအနေဖြင့်
ဝိနယ သုတ္တန္တ အဘိဓမ္မာ ပါဠိ နှင့် ဝိပဿနာ တို့အပြင် အခြားဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကို သီရိလင်္ကာ အိန္ဒိယ ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်သင်ကြားရသကဲ့သို့လေ့လာသင်ယူနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ပညာသင်နှစ်ကာလမှာ ၂ နှစ် n(semester6ခု + Thesie ) ဖြစ်ပါသည်။
M.A Degree အတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုလျှင် ဓမ္မာစရိယဘွဲ့တစ်ခုခု (မည်သည့်ဓမ္မာစရိယမဆို)နှင့် B.A Degree ( မည်သည့်တက္ကသိုလ်ကမဆို) တခုခုရရှိထားပြီးသူများဖြစ်ပြီး
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်၍ M.A တန်းဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်သောအင်္ဂလိပ်စာအရည်းအချင်းပြည့်စုံရမည်။
အသက် ၄၀ မကျော်သော ရဟန်းတော်များဖြစ်ရမည်
ကျောင်းသားများကို (၃) လပိုင်းဒုတိယအပတ်အတွင်း စတင်ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ကာ (၅) လပိုင်း ဒုတိယအပတ်အတွင်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများ ကျင်ပပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပဌမကြီးတန်းအောင်ပြီး ဓမ္မာစရိယ သာမဏေကျော် ဝိနယဓရ အဘိဝံသ စသည့်ဘွဲ့များ မပြီးပြတ်နိုင်သော ရဟန်းတော်များအတွက် ဝါတွင်း (၃) လ အင်္ဂလိပ်စာ+ ကွန်ပြူတာ စသည့်သင်တန်းများကို ဓမ္မဒူတဆေကိန္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် လက်ခံသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မကြာခင် သတင်းစာများတွင် သတင်းအချက်အလက်များ တရားဝင်ကြေငြာပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အဆုံးအမများ မိမိရင်တွင်းနှင် သူတစ်ပါးရင်တွင်း သို့ရောက်ရှိအောင် ထိရောက်စွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည့်အရည်အချင်းများ ရရှိပြည့်စုံစေဘို့ ရည်ရွယ်ကာ
ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ကိုယ်တိုင်ဦးစီး၍ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးမည့် ဓမ္မဒူတဆေကိန္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လာရောက်သင်ကြားနိုင်ကြစေရန် ညီတော် နောင်တော်ရဟန်းတော်များအား လှိုက်လှဲဖေါ်ရွေပျူငှာစွာ
Dhammaduta Chekinda University မှ ကြိုဆိုပါတော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း
ဤ သတင်းအား မိမိတို့နှင့်စပ်ရာ စပ်ရာ ရဟန်းတော်လေးများ သိရှိ၍ တက်ရောက်သင်ကြားလိုသောရဟန်းတော်များ အချိန်မှီ ပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြစေရန်
Share ပေးခြင်းဖြင့် ပတ္တိဒါန ပတ္တာနုမောဒနကုသိုလ် ယူပေးကြစေချင်ပါကြောင်း!
သံဃာမြားပွညျပသှားဖို့ မလိုတော့ပါ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့သာ သငျကွားပေးမညျ့ ဓမ်မဒူတဆကေိန်ဒဗုဒ်ဓတက်ကသိုလျကွီး
စာသငျသံဃာမြား ပွညျပသှားဖို့ လုံးဝ မလိုတော့ပါ
“အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့သာ သငျကွားပေးမညျ့ ဓမ်မဒူတဆကေိန်ဒဗုဒ်ဓတက်ကသိုလျကွီး”
ဓမ်မဒူတဒေါကျတာအရှငျဆကေိန်ဒဆရာတျောတညျထောငျဖှငျ့လှဈမညျ့ဓမ်မဒူတဆကေိန်ဒဗုဒ်ဓတက်ကသိုလျကွီး ( Dhammaduta Chekinda University) ကို
( ဓမ်မဒူတဇတေဝနျတောရဆကေိန်ဒာရာမကြောငျးတိုကျ မှျောဘီမွို့နယျရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး တှငျ) 2019-2020 ပညာသငျနှဈအဖွဈ မကွာခငျဖှငျ့လှဈသငျကွားပေးပါတော့မညျ။
M.A & Ph.D Degree ကြောငျးသားမြားကိုစတငျကာ လက်ခံပွီး သငျကွားပေးပါမညျ။
M.A တနျးအတှကျ အဓိကဘာသာရပျမြားအနဖွေငျ့
ဝိနယ သုတ်တန်တ အဘိဓမ်မာ ပါဠိ နှငျ့ ဝိပဿနာ တို့အပွငျ အခွားဘာသာရပျပေါငျးမြားစှာကို သီရိလင်ျကာ အိန်ဒိယ ထိုငျးနိုငျငံတို့တှငျသငျကွားရသကဲ့သို့လလေ့ာသငျယူနိုငျကွမညျဖွဈပွီး ပညာသငျနှဈကာလမှာ ၂ နှဈ n(semester6ခု + Thesie ) ဖွဈပါသညျ။
M.A Degree အတှကျ ဝငျခှငျ့လြှောကျထားလိုလြှငျ ဓမ်မာစရိယဘှဲ့တဈခုခု (မညျသညျ့ဓမ်မာစရိယမဆို)နှငျ့ B.A Degree ( မညျသညျ့တက်ကသိုလျကမဆို) တခုခုရရှိထားပွီးသူမြားဖွဈပွီး
အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့သာ သငျကွားပေးမညျဖွဈ၍ M.A တနျးဆကျလကျတကျရောကျနိုငျသောအင်ျဂလိပျစာအရညျးအခငျြးပွညျ့စုံရမညျ။
အသကျ ၄၀ မကြျောသော ရဟနျးတျောမြားဖွဈရမညျ
ကြောငျးသားမြားကို (၃) လပိုငျးဒုတိယအပတျအတှငျး စတငျချေါယူမညျဖွဈကာ (၅) လပိုငျး ဒုတိယအပတျအတှငျး ဝငျခှငျ့စာမေးပှဲမြား ကငျြပပေးမညျဖွဈပါသညျ။
ပဌမကွီးတနျးအောငျပွီး ဓမ်မာစရိယ သာမဏကြေျော ဝိနယဓရ အဘိဝံသ စသညျ့ဘှဲ့မြား မပွီးပွတျနိုငျသော ရဟနျးတျောမြားအတှကျ ဝါတှငျး (၃) လ အင်ျဂလိပျစာ+ ကှနျပွူတာ စသညျ့သငျတနျးမြားကို ဓမ်မဒူတဆကေိန်ဒဗုဒ်ဓတက်ကသိုလျကွီးတှငျ လကျခံသငျကွားပေးမညျဖွဈပါသညျ။
မကွာခငျ သတငျးစာမြားတှငျ သတငျးအခကျြအလကျမြား တရားဝငျကွငွောပေးမညျဖွဈပါသညျ။
မွတျဗုဒ်ဓသာသနာတျောအဆုံးအမမြား မိမိရငျတှငျးနှငျ သူတဈပါးရငျတှငျး သို့ရောကျရှိအောငျ ထိရောကျစှာ ပို့ဆောငျပေးနိုငျမညျ့အရညျအခငျြးမြား ရရှိပွညျ့စုံစဘေို့ ရညျရှယျကာ
ဓမ်မဒူတဆရာတျော ဒေါကျတာအရှငျဆကေိန်ဒ ကိုယျတိုငျဦးစီး၍ တညျထောငျဖှငျ့လှဈ သငျကွားပေးမညျ့ ဓမ်မဒူတဆကေိန်ဒဗုဒ်ဓတက်ကသိုလျကွီးတှငျ ပြျောပြျောရှငျရှငျ လာရောကျသငျကွားနိုငျကွစရေနျ ညီတျော နောငျတျောရဟနျးတျောမြားအား လှိုကျလှဲဖျေါရှပြေူငှာစှာ
Dhammaduta Chekinda University မှ ကွိုဆိုပါတော့မညျဖွဈပါကွောငျး
ဤ သတငျးအား မိမိတို့နှငျ့စပျရာ စပျရာ ရဟနျးတျောလေးမြား သိရှိ၍ တကျရောကျသငျကွားလိုသောရဟနျးတျောမြား အခြိနျမှီ ပွငျဆငျထားနိုငျကွစရေနျ
Share ပေးခွငျးဖွငျ့ ပတ်တိဒါန ပတ်တာနုမောဒနကုသိုလျ ယူပေးကွစခေငျြပါကွောငျး!
Previous PostCovid-19 ရဲ့ နောက်ထပ်သားကောင်ဖြစ်ဦးမယ့် အာရှနိုင်ငံ တခု
Next Post(၁၁) လ ခန့် ရဲစခန်းရှေ့တွင် ရပ်ထား သည့် YBSယာဉ် မီးထလောင်
ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကျမယ့် ဘေးကနေ ဆယ်ဖီပုံ တစ်ပုံကြောင့် လွတ်မြောက်ခဲ့သူ
ပွင့်ဖြူမြို့မရဲစခန်းမှ အချုပ်သား(၁)ဦးနှင့် ကလေးမြို့မရဲစခန်းမှ အချုပ်သား(၇)ဦး အချုပ်ခန်းဖောက် ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွား